समृद्धि सूचकाङ्क: 'नेपाल २१ स्थानमाथि, भारतभन्दा अगाडि' - BBC News नेपाली
भगीरथ योगी बीबीसी न्यूज नेपाली
सुधारका कारण के हुन्?
Image caption जुम्लामा भाँडा बनाउँदै एक पुरुष
किन निर्यात भइरहेको छैन नेपाली पोल्ट्री उत्पादन
नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन लागेको हो?
दक्षिण एशियाका देशको स्थिति
नेपाल सूचकाङ्कको ९० औँ स्थानमा रहँदा भारत ९४ औँ स्थानमा छ। बाङ्ग्लादेश १०९ औँ स्थानमा छ भने पाकिस्तान १३६ औँ स्थानमा।
श्रीलङ्का भने नेपालभन्दा निकै अघि ६७ स्थानमा छ।
"सूचक सच्याएर लगानी बढ्दैन"
17 नोभेम्बर 2018